Mkpọchi ọnụ ụzọ Magnetik 600Lbs na ndị na -emepụta ihe na ndị na -ebuputa ihe - YLI ELECTRONICï¼ˆASIAï¼ ‰ LTD
Ulo > Mkpọchi Magnetik > Mkpọchi Magnetic 600Lbs > Mkpọchi Magnetik nke 600Lbs Na -eme Nanị ya na Onye na -eme mkpọtụ
Mkpọchi Magnetik nke 600Lbs Na -eme Nanị ya na Onye na -eme mkpọtụ
Mgbe edobere 0-20 dị ka oge imechi ọnụ ụzọ, ọ bụrụ na ọnụ ụzọ anaghị emechi mgbe nkeji iri abụọ gachara, ọ ga-ama jijiji ruo mgbe ọnụ ụzọ mechiri. Mkpọchi eletrik nwere ọnụ ụzọ nwere mkpọchi ma dabara maka ọnụ ụzọ osisi na ọnụ ụzọ ọla .LED na-egosi Ọnọdụ Ọnụ ụzọ.
Mgbe edoziri 0-20 dị ka oge imechi ọnụ ụzọ, ọ bụrụ na ọnụ ụzọ anaghị emechi mgbe nkeji iri abụọ gachara. Ọ ga -eti mkpu ruo mgbe ọnụ ụzọ mechiri. Mkpọchi eletriki otu nwere mkpọchi ma dabara adaba maka ọnụ ụzọ osisi na ọnụ ụzọ igwe na LED na -egosi Ọnọdụ Door.
Nnwale nnwale Collinear 280kg, 600pound
Dual Voltage 12 ma ọ bụ 24 VDC (nhọrọ).
Voltage ọkọlọtọ bụ 12VDC mgbe emechara.
MOV na -enye nchedo nke ugbu a.
Ezubere ihe ndọta mgbochi.
Ihe siri ike dị elu, ụlọ aluminom anodized.
Kere na -enweghị Mechanical ọdịda.
Dịkwuo njide ike, Dual Insulative Housing.
Akwụkwọ CE site na European Union, MA Asambodo site na Ọfịs Nchebe Ọha nke China.
Nhazi ngwaahịa Nkọwa oke
Nha 270Lx48.8Wx26.4H (mm)
Akụkụ efere Armature 180Lx38.8Wx13.2H (mm)
Ike na -ejide 280kg (600 lbs)
Ntinye voltaji DC12V (DC24V na -agbanwe agbanwe)
Ugbu a 12V/500mA (± 10%); 24V/250mA (± 10%)
Adabara Ọnụ ụzọ osisi, ọnụ ụzọ iko, ọnụ ụzọ igwe, ọnụ ụzọ ọkụ
Mmepụta mgbaama Mkpọchi mkpọchi NO/NC/COM
Ụzụ 0-20sec. kemeghi
Ikanam Egosi akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ kpọchiri akpọchi; Red na -egosi agbachi
Mechie mkpuchi Aluminom anodized
Okpomọkụ dị n'elu â ‰ ¤+20â „ƒ
Temp arụ ọrụ -20â „ƒ ~+55â ƒ ƒ (-4â €” 131 ° F)
Iru mmiri 0 ~ 95%(na-abụghị condensing)
Ibu 2.1 n'arọ
Akwụkwọ MA CE-EMC CE-LVD FCC RoHS ruru WEEE
Tags na-ekpo ọkụ: Mkpọchi ọnụ ụlọ Magnetik 600Lbs Na Buzzer, ndị na -emepụta ihe, ndị na -ebubata ya, ụlọ ọrụ, ahaziri ya, nnukwu, nlele efu, China, emere na China, ego, zụta ego, ọnụ ahịa, ndepụta ọnụahịa, nkwupụta, CE, ISO9001, Ogo
Mkpọchi Magnetik nke 600Lbs
600Lbs mkpọchi magnetik ọnụ ụzọ abụọ
Mkpọchi ọnụ ụzọ magnetik 600Lbs nwere LED
600Lbs mkpọchi ọnụ ụzọ magnetik nwere LED
Mkpọchi Magnetik 600Lbs n'otu ọnụ na oge igbu oge
Mkpọchi Magnetik 600Lbs ugboro abụọ na -egbu oge